Ndinodzima sei chimiro cheNetflix? | la-manette.com
Ndinodzima sei chimiro cheNetflix?
22 novembre 2021 ndima Claude henrichon
Ngativei chokwadi, tese tinoda kuona zvirimo mukati kumhanyira paNetflix nguva nenguva. Kana zviri zve mafirimu zvakakurumbira kana zvinoshamisa zvinoratidzwa, zveNetflix chikamu chakakosha chehupenyu hwedu. Pamusoro pezvo, zvine nharo imwe yeakanakisa ekutepfenyura giant kugona kwayo kugadzira akawanda profiles.
Iwe unogona kugadzira anosvika mashanu profiles paNetflix uye ugovapa mazita etsika zvinoenderana nezvaunoda. Iri basa rinobatsira zvakanyanya kana iwe uchigovera account neshamwari dzako kana yako mhuri. Imwe neimwe mbiri paNetflix ine nhoroondo yayo yekuona uye kurudziro. Panyaya iyi, unogona kubvunza gwara redu pa nzira yekubvisa nhoroondo yekuona yeNetflix.
Asi iyi haisiyo nyaya inotifadza nhasi. Ngatiti iwe wakagadzira akawanda profiles paNetflix. Parizvino, vashoma veshamwari dzako vakatenga zvinyoreso zvavo (zvisingaite zvakanyanya, asi zvinoitika zvakadaro). Iwe saka hauna chekushandisa kune akawanda maprofile akagadzirwa.
Uri kunetseka kuti ungadzima sei Netflix mbiri? Ipapo iwe wauya kunzvimbo chaiyo. Isu tichakubatsira iwe kubvisa mamwe ma profiles pane yako Netflix account pawebhu browser uye nharembozha.
Ndinodzima sei chimiro cheNetflix muwebhu browser?
Vanhu vazhinji vanowanzofarira kushandisa zveNetflix pane desktop yavo kana laptop. Kuti uite izvi, unoda Netflix web account. Kana uri kushandisa account yakadai uye uchida kudzima profil, tevera matanho ari pasi apa:
1. Pinda muakaundi yako yeNetflix
2. Enda kune yako profile icon mukona yepamusoro yekurudyi uye sarudza "Manage Profiles".
3. Sarudza chimiro chaunoda kudzima.
4. Dzvanya pa "Delete profile" uye simbisa kuti unoda kudzima purogiramu nekusarudza "Delete profile" sarudzo zvakare.
Nzira yekudzima sei Netflix mbiri pane nhare?
Kana iwe wakafanana neni, wakanyanya nungo yekuona mafirimu palaptop uye uchida kuaburitsa pafoni yangu, unogona kugara uchidzima imwe mbiri pane yako nharembozha.
1. Tanga purogiramu yeNetflix pamudziyo wako
2. Sarudza "Edit" sarudzo mukona yepamusoro yekona.
4. Tinya pamusoro "Delete" sarudzo uye simbisa nekudzvanya pamusoro "Hongu" sarudzo.
Ndizvo zvechinyorwa chino; tinovimba wakawana gwaro iri richibatsira. Ndapota inzwa wakasununguka kutizivisa maonero ako muchikamu chemashoko pazasi.
Claude munyori kuLuxembourg-based la-manette.com, achifukidza misoro yakadai sePokémon, mitambo yemitambo uye varaidzo yepamhepo. Unogona kubata Claude Henrichon pa [email inodzivirirwa]
Zvinyorwa zvitsva naClaude Henrichon (ona zvese)
Nzira yekuchenesa MacBook yako yakasviba - Zvita 29, 2021
Maitiro ekushandisa Time Machine kutsigira Mac yako - Zvita 27, 2021
Iwo mashanu akanakisa karaoke muchina - Zvita 17, 2021
Iwo Akanakisa Mapurogiramu Emitambo Yese PC Gamer Inofanira Kushandisa
Maitiro ekutamba mitambo yeNetflix pane Android uye iOS?